को’रोनासंग ल’डिरहेका हास्यकलाकार हरिवंश आचार्यले दशैको मुखैमा लेखे यस्तो मनछुने स्टाटस ! – Halkhabar kura
को’रोनासंग ल’डिरहेका हास्यकलाकार हरिवंश आचार्यले दशैको मुखैमा लेखे यस्तो मनछुने स्टाटस !
काठमाडौँ । वरिष्ठ हाँस्य कलाकार हरिवंश आचार्यले को’रोना सं’क्रमण पुष्टी भइसके पछिको आफ्नो अनुभव सुनाएका छन् । उनले शुरुमा को’रोना ला’ग्नु अघि ड’राउन र लागि सकेपछि न’डराउन सुझाव समेत दिएका छन् । यति गर्न सकेमा को’रोनाबाट मु’क्त हुनको लागि म’नोवल बढ्ने उनले बताएका छन् ।
युवाहरुको समूह गठित कम्पासले भिडको आगमन र बहिर्गमनको विषयमा शनिबार गरेको कार्यक्रममा कलाकार हरिवंशले को’रोनालाई सामान्य रुपमा नलिन सबैलाई आग्रह गर्नु भएको छ । यो वर्षको दसैंमा टीका थाप्न म कसैको घरमा पनि आउँदिन, तपाईंहरु पनि कोही पनि मेरो घरमा नआउनुहोला, उनले भने । को’रोनाबाट बच्नका लागि हामी आफूले आफूलाई नै मन्दिर सोचौं, आफनो घर नै मन्दिर सोचौ र आ-आफ्नै घरमै बसेर दशैं मनाऔँ ।
को’रोना सं’क्रमण भएका आचार्यले दशैं दशा हुनेतर्फ विशेष स’तर्क रहन आ’ग्रह समेत गरेका छन् । उनले आफू बच्ने मात्रै होइन, अरुलाई पनि को’रोनाबाट ब’चाउनु समेत आफ्नो दा’यित्व सम्झन आ’ग्रह गरेका छन् । यो वर्षको दशैं बाँच्ने उत्साहको रुपमा लिन उनले सबैलाई आ’ग्रह गरेका छन् ।
‘हामी बाँचिराखे दशैं अर्काे वर्ष पनि आउँछ, भगवान हामीसँगै रहन्छन्’, उनले भने, ‘सा’र्वजनिक सवारी-साधन प्रयोग गरी दशैँमा यताउती नजानु होला, को’रोनासँग जो’गिनु अहिलेको पहिलो प्रा’थमिकता हो । ’आफूलाई को’रोना लागेको शनिबार १३ दिन भएको उनले बताएका छन् । आज आइतबार टेष्ट गर्ने योजनामा छु । आजको टेस्टबाट म र श्रीमती दुवै को’रोनामुक्त हुने विश्वास छ’, उनले भनेका छन् ।
Previous बलिउडका बा’दशाह शाहारुख खान कु’टिए, का’रण यस्तो रहेछ
Next नेपाल घुम्न आउनै नहुने यि ७ कारण भन्दै एक भारतीय महिलाले पोष्ट गरेको भिडियो विश्वभर भाइरल (भिडियो हेर्नुस्)